Socodka dheer ee Terre Cinque waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ay sameeyaan in Italy, iyo mid ka mid ah dhibcood Best socodka bilowga. wadooyinka hortayada ay ka mid yihiin kuwa ugu quruxda badan ee Europe iyo haddii aad tahay lover dibadeed ama qof raba qaar ka mid ah jimicsi ee u dhexeeya decadent cuntada Talyaani, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu abaalmarinta badan ee lagu raaxeysto Talyaaniga xeeb cajiib ah.
• Marka Italy, iyadoo la kaashanayo Save A tareenka, tareenka weli waa habka ugu fiican si ay u gaaraan Cinque Terre. Waxaa jira tareen degaanka, ah Cinque Terre Express tareenka, taas oo ay maamushaa xeebaha u dhexeeya saldhigyada Centrale of La Spezia iyo Levanto. Waxaa istaago at dhan shan magaalooyinka (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), iyo waxaad u baahan doontaa si aad u qaadato in ay u guuraan u dhaxeeya marka aad tahay degaanka (haddii aad doorato in tug ku tamashle u soonnaa-u babac). Sida of xagaaga 2016, kharashka Terre Cinque ku Express waa € 4 halkii safar. Inta lagu jiro xilli-off, caadi ahaan ka November ilaa Maarso, kharashka ugu dhaco, si € 1,80. tareen Tani ma bixiyaan fadhiga rights reserved.
The Eagle Walk wuxuu ka kooban yahay 23 marxaladaha lala, oo raac marin neefta-qaadashada dhex Tirol ah. The Best dhibcood socodka bilowga ee gobolka, Qaybaha badan oo si fudud loo heli karaa by baabuur cable oo dhameystirtay sida buuxda ah- ama maalin badhkeed safar. Waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigo qaybta aannu u jecel of blog this.
Haddii aad qorsheyneyso tug maalin ama u quudhin multi-toddobaadkii ee buuraha, waxaad ka heli doontaa Walk Eagle in ay noqon weyn a waayo-aragnimo dibadda. Waxay bixisaa fursado qabanin si ay u sahamiyaan, waayo-aragnimo, iyo xirmaan dabeecadda.
Socod maalin nus ah socotada mar mar socda. From Kramsach in Inn Valley Hoose, qaadan wiishka kursiga gurigii Sonnwendjoch ah. socod A gaaban keenaysaa in ay idyllic Zireiner baddii, kaas oo ku yaal dooxada ku dhowaad 1,800-oo mitir heerka badda - meel weyn si uu ku qaboojiyo off in kulul xagaaga bilood. socdaan sii wadaan in ay Zireiner Alm daaqa (1,698m) ka hor in ay sare ee wiishka kursiga laabtay, oggolaadaan in aad dib u fuulaan hoos gelin Valley Inn ee.
Way fududahay inaad safarka laga bilaabo UK ilaa Austria tareen. Waxaad tegi kartaa ka London in Vienna, Salzburg ama Innsbruck maalin keliya by tareenka-xawaaraha sare. Ama qaado qadada ah Eurostar ka London si Brussels, xawaaraha sare ee Thalys tareen si ay u Cologne, iyo Nightjet ka fiican tareen qarsoodiga ah si Innsbruck, Linz, ama Vienna habeen. Marka waxaa, helitaanka in Tirol waa u fududahay ay network dhamaystiran dadweynaha gaadiidka. Waa ay fududahay in ay u safraan agagaarka gobolka isticmaalaya tareenada. Itaaliya doonaya in ay qaataan on qayb ka mid ah ama dhammaan Walk Eagle ka heli kartaa dhibcood ka bilaabatay iyo dhameysatay ee heer kasta oo isticmaalaya gaadiidka dadweynaha degaanka.
BEST POINTS socodka START: CAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
Camino waxaa loo yaqaan Jidka St James in English. Dhammaan waddooyinka Camino Xajka waxay aadaan Santiago de Compostela maadaama ay tani tahay halka ay ku harsan yihiin St James, (Santiago), laga helay qarnigii sagaalaad. Xajka wuxuu caan ku ahaa 10-ka, 11th, iyo qarniyadii 12aad ka dibna si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacay caannimada.
By qarnigii 20-, ku dhowaad hal ma marayay mid ka mid ah dariiqyada. Ka dib dabayaaqadii 1970-kii iyo horraantii 1980-kii waddadii waxay noqotay mid ay daneeyaan in yar. Waxay bilaabeen inay qoraan oo khariidada dariiqyada mar kale.
Qarnigii 21aad, fikradda ah Xajka waa laga yaabaa in quaint. Si kastaba ha ahaatee, dadaalka socodka muddo bil ah iyo in laga jaro aaladaha casriga ah ayaa si xorriyad leh u xoreynaya.
Sarria waa magaalada ka jeeclaadeen by xajka sida dhibic ay koraan de Camino ee Santiago. Of dheeraad ah ka badan 300,000 dad sodcaal ah in ay guuri Santiago de Compostela in 2017, qaar ka mid ah 60% ka doortay inuu raaco Frances Camino ah. Iyo in ka badan 80,000 iyaga doortay Sarria sida saleeyo. Sababta ugu weyn ee loo doortay Sarria ayaa ah inay bixiso masaafada ugu yar ee looga baahan yahay xujaajta in la siiyo Compostela (shahaadada Xaajigan ee). Masaafada u Santiago laga dabooli karaa in marxaladaha kaliya shan iyo faanaa tiro badan oo ah fursadaha hoy iyo adeegyada loogu talagalay dad sodcaal ah. Sarria waa u fududahay si aad u hesho in gaadiidka dadweynaha ka qaybaha kala duwan ee Spain.
From Lugo, ah tareen sidoo kale waa ikhtiyaarka ugu raaxada badan. Renfe bixisaa xiriir maalin kasta tiro badan oo aad ka heli doonaa si Sarria ka Lugo ee 30 daqiiqo.
Waxaa la odhan karaa in raad Westweg waa asalka ah ee dhammaan wadooyinka hortayada long-distance Jarmal. Waxa uu noqday jidka ugu horeysay ee loo qoondeeyey ee noociisa ah dib ugu soo laabtay 1900. Tan iyo markaas, raad ayaa koray si ay u daboosho fogaan ah 177 miles (285 kiiloomitir) - laga bilaabo Pforzheim ee waqooyiga kuna dhammaata Basel oo ku taal koonfurta.
Ready in ay ku riday on kabaha socodka aad ku raaxaysan qaar ka mid ah socodka dabeecadda? Ballansan aad tareen daqiiqo gudahood iyo NO lacag dheeri ah ee Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#tug #tug #Goobaha socodka #wadooyin longtrainjourneys trainjourney talooyin tareenka